> Resource > Beddelaan > Goobaha Like Keepvid: Download YouTube Videos fudud oo dhakhso ah
Keepvid.com waa online video download goobta si fiican u yaqaan oo lacag la'aan ah. Dadka intooda badan waxay jecel yihiin in ay u isticmaalaan in ay soo baxdo iyo badbaadin videos ka YouTube, vimeo, Dailymotion, Metacafe, iFilm iyo in ka badan. Si fudud nuqul oo URL Jinka aad jeceshahay u video dajinta. Si kastaba ha ahaatee, Keepvid mararka qaarkood ma aha sidaas lagu qanci karo. Tusaale ahaan, waxaa shaqada joojiyo mararka qaarkood, ama ma taageerayso qaar ka mid ah goobaha video aad jeceshahay, ama aan u bedeli karaan video in qaabka aad rabto. Malaha sababahani dartood, dad badan oo doonayaa in wax la mid ah Keepvid soo bixi web videos halkii.
Hadda, waxaan ku soo bandhigi doonaa hal barnaamij sare loo qiimeeyo sida Keepvid iyo mid ka mid ah website-ka ugu caansan sida Keepvid. Waxaan rajeynayaa waxaa fiican, waayo, waxaad guys.
Sida barnaamijka KeepVid ah: Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac)
Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) waxay la mid tahay Keepvid. Waxaa ku dhowaad dhammaan taageertaa caanka ah video-wadaaga videos sida YouTube, DailyMotion, veoh, vimeo iwm, ilaa 100 goobood. Waxaa kale oo ka wanaagsan yahay Keepvid. Waxaa soo bixi kartaa videos in Dufcaddii oo uu leeyahay download taariikhda. Sidoo kale, nuqul oo paste URL u duuban, xitaa waxay kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi videos in mid ka mid click. Tan ugu muhiimsan, waxa ay leedahay muujinta ah ee diinta video. Fadlan isku day ah haddii aad xiisaynayso.
Savevid.com waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan sida Keepvid. Sida Keepvid, waxa kuu ogolaanayaa inaad nuqul oo URL Jinka aad rabto in aad kala soo bixi, waayo, video dajinta. Oo waxaa sidoo kale taageeri qaar ka mid ah goobaha video waaweyn sida Youtube, Google Videos, Metacafe iyo aad u badan oo ah qaabab FLV, AVI, MOV, Mpg ama wmv.